Ayini ama-ketones emchameni wengane: okujwayelekile, ukwanda > Isifo sikashukela
Izidumbu zeKetone emchameni ezinganeni
Izidumbu zeKetone (acetone) - igama elijwayelekile leqembu lezinto ezibandakanya i-beta-hydroxybutyrate, acetone neacetoacetate.
I-Acetone, ngokungafani neminye emibili, akuyona imithombo yamandla futhi ayikwazi ukuba ne-oxid emzimbeni.
Ama-ketones angama-asidi we-organic, ukunqwabelana kwawo emzimbeni kuholela ekuguqukeni kwenkomba ye-hydrogen (pH) enkombeni ye-acid. Ukwanda kokuxineka kwama-ketones egazini kubizwa ngokuthi yi-hyperketonemia, futhi i- "acidization" yomzimba kuleli cala ibizwa nge- ketoacidosis. Kulokhu, izinqubo ze-Fermentation ziphazamiseka.
Ukuhlangana kwezidumbu ze-ketone enganeni kukhuphuka ngale mibandela elandelayo:
ukusebenza komzimba okude,
Ukudla okuhambisana nokudla kwamafutha nokuntuleka kwama-carbohydrate,
Okuqukethwe okwandayo kwe-acetoacetate kunomthelela kusebenze kokuhlanganiswa kwe-acetone - into enobuthi. Zonke izicubu nezitho zomzimba zihlupheka ngalokhu, kodwa ngaphezu kwakho konke - uhlelo lwezinzwa.
Emzimbeni, izindlela zokuzivikela ziyabangelwa, ngenxa yokuthi amaphesenti athile ama-ketones adonswa umchamo.
Isimo lapho izidumbu ze-acetone zidalulwa khona emchazweni zibizwa ngokuthi yi-ketonuria. Ama-ketones nawo aqukethe umoya oxoshwe - ngale ndlela umzimba ukhipha i-acidosis.
Uyini umkhuba wemizimba ye-ketone ezinganeni?
Ngokuvamile, ama-ketones omchamo womuntu wanoma yimuphi ubudala akufanele anqunywe. Ukuba khona kwemizimba ye-acetone kumchamo kunqunywa ngokuhlaziywa kwesilinganiso. Ukudlula kwama-ketones kwenzeka ngesikhathi sokulamba, isifo sikashukela kanye ne-nondiabetesic ketoacidosis.
Ukuhlola izinga lama-ketones umchamo wengane ekhaya, ungasebenzisa imichilo yenkomba ekhethekile namaphilisi okuhlola (uKetostix, Chemstrip K, Uriket-1 nabanye). Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngamunye walezi zivivinyo wenzelwe ukunquma into ethile. Ngakho-ke, isibonelo, i-Acetest isetshenziselwa ukuthola i-acetone, iKetostix - i-acetoacetic acid.
Ububanzi obubonakalayo bemichilo ye-Uriket-1 ngu-0-16-16.0 mmol / L. Umphumela uhlolwe umzuzu owodwa ngemuva kokucwiliswa kwendawo yokuzwa yomchamo emizuzwini engu-2-3. Umbala womucu uqhathaniswa nesilinganiso esiphakanyiselwe umenzi. Umbala omhlophe (ukungabikho kwa-stain encane) kukhombisa ukungabikho kwe-acetone kumchamo (0,0 mmol / L), upinki ophuzi ulingana nenani le-0.5 mmol / L, umbala ogqamile ngokwengeziwe - ukusuka ku-1.5 kuye ku-16 mmol / L.
Yiziphi izimbangela zokuvela kwemizimba ye-ketone emchameni wengane?
I-Ketonuria yenzeka ngesifo sikashukela, indlala, ukudla okuphansi noma okune-carbohydrate, ukugabha nohudo.
Uhlobo 1 no-2 sikashukela kuyizindlela ezivame kakhulu zalesi sifo. Isifo sikashukela sohlobo lokuqala sivame ukutholakala ezinganeni nasebusheni, yize lesi sifo singabonakala nganoma yisiphi isikhathi.
Isifo sikashukela i-Autoimmune sidalwa ukubhujiswa kwamaseli we-beta, ukuba khona kwama-autoantibodies, ukuntuleka ngokuphelele kwe-insulin, inkambo enzima ethambekele ketoacidosis. Isifo sikashukela se-Idiopathic kungenzeka ukuthi senzeke kubantu abangayona iCaucasoid.
Isifo sikashukela sohlobo 2 siqabukela kakhulu ezinganeni. Lesi sifo siqhubeka njengamanje sifihliwe noma sinokubonakaliswa okuncane komtholampilo. Kodwa-ke, izifo kanye nokuxineka kakhulu kungadala ukuhlinzwa kwe-acetone.
Ukuba khona kwama-ketones kumchamo wengane kubonisa ukubola kweshukela okubangelwa ukuntuleka kwe-insulin. I-Ketonuria ezinganeni ibuye yenzeke ngezifo ezinzima ezithathelwanayo zenzeka nge-febrile ne-pyretic fever, nendlala, ikakhulukazi ezinganeni ezincane.
I-Ketonuria yemvelo engeyona eyesifo sikashukela ivela ezinganeni ezinokungafani komthethosisekelo njenge-neuro-arthritic diathesis (NAD). Lokhu ukuphazamiseka kwezakhi zofuzo ezinqunywe ngofuzo, okuvezwa ngesimo se-hyper-excitability, allergic nezinye ukubonakaliswa.
I-NAD ibonwa ku-2-5% wezingane, isb., Incane kakhulu kunezinye izinhlobo zedayirasi. Lesi sifo sihlotshaniswa nezinto zofuzo kanye nezinto ezahlukahlukene zangaphandle. Izici zangaphandle zifaka ukusetshenziswa kabi kwamaprotheni (ikakhulukazi inyama) ngowesifazane okhulelwe noma ingane encane.
Ezinganeni ezine-NAD, izinqubo ze-metabolic ziyaphazamiseka, ngenxa yalokho inkinga ebangelwa yi-acetone yenzeka ngezikhathi ezithile.
Isifo sokuhlanza kwe-acetoneemic ezinganeni sibonisa ngokubonakala kwe-acetone ephuma emlonyeni lapho kungekho khona i-hyperglycemia, ketonuria, acidosis.
Ukuhlanza okunjalo kuqoshwa ezinganeni ezineminyaka emibili kuya kweyishumi (imvamisa emantombazaneni) futhi kunyamalale ngokuphelele lapho kwenzeka ukuthomba. Ukweqa ngokweqile kwengqondo, ngokomzimba, ukudla okungenakulinganisela kungadala ukugabha.
Ukushiya phansi kuqala ngokungalindele noma ngemuva kochungechunge lwezinto ezandulelayo: ukubulawa ngamandla, ikhanda, ukuntuleka kokudla, i-halitosis, ukuqunjelwa. Ukusikhulula kuhambisana nokoma, ukomisa, ukudakwa, ukuphefumula, i-tachycardia. I-Vomit nokuphefumula kunuka njenge-acetone. Ukuhlolwa kokuba khona kwama-ketones kumchamo kuyakhanya. Lesi simo siyanyamalala ngosuku olulodwa kuya kwezimbili.
Lapho kwenziwa isifo, kutholakala uhlobo lwe-ketoacidosis - isifo sikashukela noma esingesoshukela. Izici eziphambili ze-ketoacidosis engeyona yesifo sikashukela ukungabikho komlando wesifo sikashukela, i-hypoglycemia kanye nesimo esingcono kakhulu sesiguli.
Ukubona i-hyper- kanye ne-hypoglycemic coma, ukuxilongwa ngokushesha kwama-ketones kuyenziwa, okususelwa eqinisweni lokuthi nge-hyperketonemia, imizimba ye-acetone ikhishwa emchameni. Kulokhu, ukusabela kombala kwenziwa kwi-acetone kumchamo. Phambilini, lesi sifo satholakala ngokuphefumula okubi okuthile, okukhumbuza ama-apula avuthiwe.
Okuyinhloko (kwemvelaphi engaziwa noma i-idiopathic)
I-Basic syndrome ivela ngokudla okungondleki (isikhathi eside sekhefu lokulala, ukuhlukunyezwa kwamafutha). Lolu hlobo lokuphazamiseka luphawu lwe-NAD futhi luyisifo sokuhlanza i-acetonemic.
Isici esiyimbangela esikhulu ukuvela kwendlalifa yomthethosisekelo (isb., NAD). Ngasikhathi sinye, kufanele kukhunjulwe ukuthi noma yimiphi imiphumela enobuthi, yokudla, yokuxineka kanye ne-hormonal ku-metabolism yamandla (ngisho nasezinganeni ezingenayo i-NAD) ingadala ukugabha kwe-acetone.
Isifo seSecondale sakhiwa ukulwa nezifo, ukuphazamiseka kwe-hormonal, izifo ezithize kanye nomonakalo kanye namaqhubu wesistimu yezinzwa ephakathi. I-ketoacidosis ingavela esikhathini sokuqala kokusebenza (ngokwesibonelo, ngemuva kokuphuma kwama-tonsils).
Abanye ososayensi banonophele nge-ketoacidosis yesifo sikashukela njengendlela yesibili yesifo sikashukela. Leli phuzu lisuselwa eqinisweni lokuthi okokuqala lihambisana nezinye izizathu (ukuntuleka kwe-insulin) futhi lidinga ukwelashwa okuhlukile ngokuphelele.
Kubalulekile kudokotela wezingane ukuthola umlingiswa oyisisekelo noma wesibili we-ketoacidosis. Ekutholakalweni kwe-acetonemic syndrome yesibili, kufanele kusungulwe isici esiqondile sokutholwa kwemvelo, ngoba amaqhinga okuthola ukwelashwa ancike kulokhu. Kuyadingeka ukukhipha i-pathology ehlanzekile yokuhlinzwa, isimila se-CNS kanye nokutheleleka.
Yini okufanele uyenze lapho imiphumela yokuhlola ikhombisa i-4.0 mmol / l?
Le nkomba ikhombisa ubucayi obulinganiselayo. Uma i-acetone yomchamo ingaveli okokuqala, futhi abazali bayazi imbangela yokuphulwa, ukwelashwa kungaqhutshwa ekhaya. Kufanele ushayele udokotela wezingane futhi afeze ukuqokwa kwakhe.
Uma kuqala ukubonakala kwezimpawu ze-acetonemia ne-acetonuria, kubalulekile ukubiza i-ambulensi, ngoba isimo sengane singadinga ukwelashwa okungalashwa.
Kungani umchamo unuka i-acetone?
Izidumbu ze-ketone ezingeziwe zidonswa ngaphandle komchamo - yingakho iphunga le-pungent. Kanjalo, umchamo awunephunga le-acetone, iphunga lifana ne-ammonia noma izithelo. Futhi, iphunga livela emlonyeni futhi lifana nephunga lamaapula avuthiwe. Uma lezi zimpawu zivele, umchamo kufanele uhlolwe kusetshenziswa umucu wesikhombi.
Yini inkinga ye-acetonemic?
Inkinga ye-acetonemic iwukubonakaliswa ngokweqile kwe-dysmetabolic syndrome. Lo mbuso ungavusa ingcindezi, i-SARS, ukondla ngenkani, ukuhlukunyezwa kwenyama nokudla okunamafutha ngokuntuleka kwama-carbohydrate, ushokoledi, ukucindezela okukhulu.
izimpawu zokuphelelwa ngamanzi emzimbeni
Ukwelashwa kwe-ketonuria engenashukela kuyinkimbinkimbi. Emahoreni okuqala ayi-12, kukhonjiswa indlala, kuthathwa izinyathelo zokubuyisela amanzi emzimbeni. Ukuze ukomisa kancane, thatha i-Rehydron.
Unganika ingane yakho amanzi amaminerali we-alkaline. Uketshezi kufanele unikezwe okuncane, kepha kaningi (njalo ngemizuzu engama-20 ngesipuni se-dessert). Njenge-antiemetic, iMotilium kufanelekile (mhlawumbe ngesimo sokumiswa).
Ingane inikezwa ama-enterosorbents (Polysorb, Smecta). Ngemuva kokumisa ukugabha, kunikezwa ama-enzymes (Pancreatinum).
Akunjalo kuzo zonke izimo, kungenzeka ukuba kuthengiswe ingane ekhaya, ngoba ukuhlanza okungenakugwenywa kuvimbela lokhu. Ngomzimba olinganiselayo kuya kokwehla emzimbeni, ukwelashwa kwe-infusion kwenziwa esibhedlela.
Nge-non-diabetic acetonemic syndrome, ukudla kudla indawo ebalulekile. Ngosuku lokuqala ingane ayondli. Lapho ukuhlanza sekuyehla, kunikezwa ukudla okulula okunama-carbohydrate atholakalayo kanye nokuvinjelwa kwamafutha. Kuyadingeka ukugcina uhlobo lokuphuza.
Ngaphandle komhluzi ocebile, othosiwe, izitshulu, izitsha ezinamafutha, amasoseji, ukubhema, ukudla okunezipayisi, okumnandi, ufulawa neminye imifino (i-sorrel, isithombo, uphizi oluhlaza).
Unganikeza okusanhlamvu emanzini noma kubisi-lwamanzi (1: 1), umhluzi wenkukhu (owesibili), amazambane abilisiwe, imikhiqizo yobisi, ama-crackers, amakhukhi kaMaria, ama-apula abhakwe, inhlanzi enamafutha amancane abilisiwe.
Ngokufika ebusheni, izinkinga zidlula. Bazali kufanele bakhumbule ukuthi ukufinyelela okufika ngesikhathi ekunakekelweni kwezokwelashwa kanye nokubambelela ekuncomeni kodokotela kufaka isandla ekukhululekeni okusheshayo kokuhlaselwa kanye nokuvinjwa kwezinkinga.
Ayini ama-ketones kumchamo futhi ajwayelekile yini?
Ama-ketones yimikhiqizo emithathu yesigamu yokuphila kwamaprotheni (ketogenic amino acid) eyenziwe ngesibindi. Lokhu kufaka phakathi:
i-beta hydroxybutyric acid,
Akhiwa ngesikhathi sokukhuphuka kwamafutha nokukhululwa kwamandla. Kungani amakhemikhali la abizwa ngokuthi ngabalamuli? Ngoba-ke ziyaguqulwa: esibindini, senziwe ngaphandle, bese sikhishwa ngokushesha emchameni ovela emzimbeni, ngaphandle kokulimaza.
Ngokwe-metabolism ejwayelekile kuwo wonke umuntu omdala nengane, izinga lokuhlushwa kwemizimba ye-ketone liphansi kakhulu kangangokuba alinqunywa indlela ejwayelekile yelebhu. Isimo sansuku zonke singu-20-50 mg. Ayini ama-ketones womchamo? Uma zanda futhi zitholakala kuwo, khona-ke izinqubo ze-pathological emzimbeni ezihambisana nokuphazamiseka kwe-metabolic zenzeka ngezinga elithile noma kwelinye.
Ukwehluleka kwesilinganiso se-fat metabolism kuholela ekhuphukeni kwemizimba ye-ketone emchameni wengane. Kusho ukuthini lokhu? Kulokhu, ama-ketones akhuphuka ngokulingana nokwanda kwezinga le-metabolism yamafutha. Kepha isibindi asinaso isikhathi sokuwacubungula, okuholela ekuqongeleleni kwawo egazini, kusuka lapho ama-ketones angena khona umchamo. Lesi simo sibizwa nge- ketonuria noma i-acetonuria.
Kubantu abadala, izimo ezinjalo zivame ukwenzeka yindlala noma isifo esifana nesifo sikashukela.
Izingane ezisencane zasenkulisa kanye nobudala besikole kusuka eminyakeni eyi-12 kuye kwengu-12 zisengozini. Kuzo, i-ketonuria ingakhula ngenani elikhulayo emasosheni omzimba, amasistimu wokugaya ukudla (ngokwesibonelo, ngezifo ezithinta isifo sokuphefumula noma izifo zamathumbu).
Lezi nezinye izifo, kufaka phakathi amasosha omzimba, kuholela ekushodeni kwe-glycogen. Lokhu ushukela onqwabelana esibindini. Ngemuva kokuthi umzimba uchithe yonke imali ebekiwe, isilinganiso sokucolwa kwamafutha siyakhuphuka, okuholela ekwandeni kwama-ketones.
Lapho kucubungulwa, iminonjana yemizimba ye-ketone emchini akuyona ukwephulwa okukhulu?
Ukuzivocavoca okusebenzayo okusebenzayo, okuholela ekusetshenzisweni ngokushesha kwe-glycogen.
Ezinganeni, izindawo ezigcinwe glycogen zincane, futhi ukusetshenziswa kwamandla kuphezulu ngenxa yokusebenza nokuhamba okuphezulu. Ukwanda kwezindleko zamandla ezihambisana nomsebenzi womzimba kuholela ekuqongeleleni okuncane kwama-ketones kumchamo.
Izizathu ezingenzeka zokwanda kwama-ketones
Ukutholwa kwezidumbu ze-ketone emchini akuyona into engjwayelekile. Ikakhulu ezinganeni nakwabesifazane abakhulelwe. Kwesinye isikhathi ama-ketones angakhuphuka ngenxa yokushoda kwe-carbohydrate, kepha izikhathi eziningi zimbi kakhulu.
ukuphazamiseka ekukhiqizeni i-insulin,
ukucindezeleka okukhulu kwengqondo,
isikhathi sokusebenza ngemuva kokusebenza,
ukuba khona kwezifo zamathumbu ezibangelwa amagciwane kanye namagciwane.
Uma ingane inezikhathi ezi-2 noma ngaphezulu ekuhlaziyeni ukwanda kwama-ketones kuyabonakala, lesi yisikhathi sokubonisana nochwepheshe futhi wenze ukuhlolwa okuphelele ukuthola isifo esithile.
Kunezindlela eziningi zokuhlolwa kwezidumbu ze-ketone emchameni wengane. Kuze kube manje, kunezibalo eziningi. Lokhu kufaka phakathi:
isampula eguquliwe yeRothera,
Zonke lezi zindlela zenziwa ezimweni zelebhu. Isibonelo, ukuqapha isimo seziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus, ngesikhathi sokukhulelwa, noma ukucacisa nokuhlukanisa umehluko wezifo.
Kodwa okuthandwa kakhulu yimichilo eqondile noma ukuhlolwa kwasekhaya kwe-acetone. Inzuzo yabo ukuthi ekusololweni kokuqala kwe-acetonemic syndrome noma i-ketoacidosis, ungaxilonga ngokushesha ekhaya bese uqala ukwelashwa.
Ukuze wenze ukuhlaziya okubonakalayo, awudingi ukulandela noma yimiphi imithetho ekhethekile nokudla. Futhi ngocwaningo, udinga kuphela amathonsi ambalwa omchamo.
Ukuze ukwazi ukuthola imiphumela, ulwazi oluthile aludingeki. Idatha yokuhlaziywa ikhonjiswa ngamanani amabili "akhona" noma "amabi".
"Minus" - ngokungafanele,
"Futhi" - kukuhle okuncane
"2 plus" no "3 plus" - impela,
"4 plus" - okuhle kakhulu.
Izifundo zaselabhorethi azikhombisi kuphela ukwanda kwemizimba ye-ketone, kodwa futhi nokuba khona kweglucose, okuyingozi kakhulu. I-urine glucose imvamisa ikhombisa i-ketoacidosis, engadala ukonakala kwesifo sikashukela ngenxa yokushoda kwe-insulin.
Kwesinye isikhathi izimpawu zomlingisi we-hyperketonuria zingabhekwa, kepha ukuhlolwa ngasikhathi sinye kubonisa umphumela "ongemuhle". Kulokhu, kungcono ukuphumelela izivivinyo zaselebhu noma uthintane nesibhedlela ngokushesha ukuze uthole usizo lodokotela.
Kungani i-ketonuria iyingozi?
Ukwanda okunamandla kwemizimba ye-ketone kunegalelo ekukhuleni kwenhlupheko ye-acetone, ebonakala ngokushisa komzimba okuphezulu, i-lethargy, ukugabha kakhulu, izihlalo ezikhululekile kanye nokuphelelwa ngamandla komzimba.
Ngaphezu kwalokho, izidumbu ze-ketone zingumenzeli onamandla oxidizing. Ngakho-ke, zingangena kalula ekuphendukeni kwamakhemikhali nge-membrane membrane yamaseli, futhi zonakalise izicubu, kufaka phakathi ubuchopho.
Kaningi ngemuva kokudla ngesikhathi sobunzima be-acetonemic, umzimba uvusa ukufakwa komshini wokuvikela - ukugabha, ukuvimbela ukwanda okukhulu kwama-ketones.
Izidumbu zeKetone aziwona kuphela umenzeli oqinile oxidizing, kodwa futhi zinobuthi obuqinile obangela ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, ngenxa yalokho okungaphazamiseka kuyo yonke imisebenzi ebalulekile yomzimba.
Kungakho ngesikhathi senhlupheko umsebenzi obaluleke kakhulu ukulandela ukudla okuqinile, ukuthengisa kumntwana hhayi nge-glucose kuphela, kodwa nezisombululo eziqukethe usawoti nezinye izinto ezinamaminerali.
Izinhlobo kanye nezimpawu zobunzima be-acetonemic
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko ze-acetonemic syndrome: eyokuqala neyesekondari.ISecond i-exacerbation yezifo ezinjengesifo sikashukela, i-toxicosis yesimo esithathelwanayo, ukwehluleka kwesibindi, i-hemolytic anemia, i-hypoglycemia nabanye abaningi.
Okuyisisekelo yisici esingaphakathi emzimbeni somzimba esingatholakala vele ngonyaka wokuqala wempilo yengane. Izinkinga ze-acetonemic zithintwa yizingane ezinemizwa okuthiwa yi-neuro-arthritic abnormality yomthethosisekelo womzimba.
Ezinganeni ezinokungalingani okunjalo, izinkinga kanye ne-hyperketonemia ziphindwa kaninginingi ngengozi yokukhula zibe yi-acidosis.
Yini eyinqayizivele kwe-neuro-arthritic anomaly:
ukulala kabi kusukela ngesikhathi sokuzalwa, ukukhathala okuphezulu kanye nokuthakasa, uhlelo lwezinzwa luphelelwa ngamandla ngenxa yobuningi bezinqubo zokuzikisa ngenxa yezinqubo zokuvimbela,
ukuntuleka kwe-oxalic acid emzimbeni,
ukusweleka kwama-enzyme athile wesibindi,
i-carbohydrate engasebenzi kahle kanye nokudla okunamafutha,
ukungasebenzi kahle ohlelweni lwe-endocrine oluhambisana nomzimba,
dysuria yemvelaphi engatheleleki.
Kwezinye izingane, ngokwesibonelo, ngesikhathi sokutheleleka noma emazingeni okushisa, inkinga ye-acetone ingenzeka kanye, idlule ngokushesha bese inyamalala ngaphandle komkhondo, ingaziphindi. Lokhu kungaba ukusabela komuntu kwengane ekucindezelekeni kwengqondo noma ukucindezelwa esikhathini sokusebenza.
Isimo somtholampilo sosizi lubonakala ngomkhuhlane, ukuphindaphindwa (kwesinye isikhathi) ukugeza, ukudakwa, ukuphuma komzimba, ubuthakathaka, isibindi esikhulisiwe, ukuqunjelwa kobuhlungu esiswini, ukuba khona kwephunga elibonakalayo le-acetone ephuma emlonyeni, i-hypoglycemia ingabukwa. Ama-ketones kumchamo wengane negazi andiswa kakhulu. Imvamisa phakathi nenkinga, amaseli amhlophe egazi, ama-neutrophils, amaseli abomvu egazi kanye ne-ESR awavuki kakhulu.
Kubantu abadala, inkinga ye-acetone ngenxa yokungatheleleki okunamandla kanye nezinhlelo ezivuthiwe ngokuphelele kulula kakhulu.
Ukuthola inani le-acetone emchameni wengane, kuyadingeka ukusebenzisa izivivinyo zomchamo welebhu. Imiphumela ethembekile itholakala ekufundweni kwengxenye yasekuseni. Ukubala inani lemizimba ye-ketone kwenziwa ngamasampula akhethekile nama-reagents.
Zonke izinhlobo zokuhlolwa komchamo welebhu zinencazelo efanayo yobungako:
"-" - Ukuhlaziywa okungalungile, izidumbu ze-ketone azikho emchini.
"+" - uhlaziyo luthembekile buthakathaka, indlela emnene ye-ketonuria.
I- "2+" ne- "3+" - ukuhlaziya kulungile, ngokulinganisela kwe-ketonuria.
"4+" - umchamo uqukethe inani elikhulu lemizimba ye-ketone, i-ketoacidosis.
Abazali bangasebenzisa futhi imichilo ekhethekile ethengiswa emakhemisi. Le ndlela yokuxilonga ithandwa kakhulu ngoba yenziwa ngokushesha futhi ayidingi ukuxhumana nesikhungo sezokwelapha.
Imichilo yokuhlola ingasetshenziswa kuphela kumchamo omusha oqoqwe kungabikho amahora angaphezu kwangu-2 edlule. Ngemuva kokuntywiliselwa imizuzwana embalwa, bashintsha umbala, bakhombisa izinga le-ketonuria. Umphumela kufanele uqhathaniswe nesampula enamathiselwe emaphepheni wokuhlola.
Isibonakaliso esingaqondile se-ketonuria ushintsho ekuhlaziyeni kwe-biochemical kwegazi. Emiphumeleni yocwaningo lwelabhoratri, kunganda ukubonwa kwezinga le-urea ne-creatinine. Ekuhlolweni kwegazi okujwayelekile, ukwanda kwesikhombi se-hematocrit kwesinye isikhathi kuyatholakala.
Ekwelapheni i-ketonuria, kunconywa ikakhulu ukwelapha lesi sifo esiyimbangela. Ingane ikhonjiswa ukuphumula kombhede, abazali kufanele bakhe izimo zikhululekile. Izingane ezihlushwa i-ketonuria zihlotshaniswa nokuzikhandla okukhulu ngokomzimba nokucindezelwa okungokomzwelo.
Ukwelashwa kweKetonuria kufaka phakathi ukudla. Izingane zikhonjiswa ukudla ngokukhuphuka kwengxenye yama-carbohydrate namaprotheni, kanye nenani elilinganiselwe lamafutha. Ukudla kufanele kube njalo - okungenani izikhathi eziyi-6-7 ngosuku. Lapho kukhona isifo sikashukela, imijovo ye-insulin iyimpoqo.
Ukusheshisa ukususwa kwezidumbu ze-ketone emzimbeni, kunqunyelwe i-enemas yokuhlanza. Ngaphezu kwabo, ama-sorbents angasetshenziswa. Futhi, ukuqedwa okusheshayo kwe-acetone kunomthelela ekuphuzeni kakhulu. Uma kungekho ukungqubuzana, ukukhetha kufanele kunikezwe itiye elimnandi.
Ngokuqina okulinganiselayo kwe-ketonuria, kunconywa ukwelashwa kokungenelela. Kwenziwa esibhedlela, ukuvumela ukuthi ukhiphe ama-ketones egazini. Imvamisa, ukwelashwa infusion kwenziwa kusetshenziswa izixazululo kasawoti kanye noshukela.
I-ketoacidosis iphathwa ngaphansi kokunakekelwa okuqinile. Ukulungisa ibhalansi esezingeni le-acid, izingane zikhonjiswa ukwelashwa okuhlanganisa izixazululo kasawoti, ushukela, ne-albhamuin.
Njengamanje esigabeni samanje sokwelashwa lapho kukhona isifo sikashukela, kufanele kunikezwe izisombululo eziqukethe i-sorbitol. Lokhu kotshwala be-polyhydric kunikeza umzimba amandla, kungakhathalekile ukuthi kune-insulin.
Izidumbu zeKetone zinomthelela onobuthi emzimbeni wengane. Zinqabela ukusebenza kwazo zonke izitho zomzimba. Imvamisa, izinso, inhliziyo kanye nengqondo kuhlushwa ukwanda kwe-acetone egazini. Imizimba yeKetone ibuye iholele ekuphepheni komzimba.
Ngenxa yokwanda kwesibalo semizimba ye-ketone, ukwephulwa kokuqamba kwegazi kuyabonakala. Ukuntuleka kwe-calcium ne-potaziyamu kungaholela ku-pathologies yokuqothuka kwenhliziyo nemisipha yamathambo - i-arrhythmias, i-paresis kanye nokukhubazeka.
I-ketoacidosis ivimbela umsebenzi wezinso. Ngokuphikisana nesizinda sokukhuphuka kwe-acetone, ukuncipha kwekhono lazo lokuhlunga kuyabonakala. Ngenxa yomphumela ochaziwe, ezinye izinto eziyingozi ziqongelela emzimbeni wengane. I-ketoacidosis ehlala isikhathi eside ingadala ukuhlaselwa kokwehluleka okubi kakhulu kwe-renal.
Ku-ketoacidosis enzima, i-edema yamakhemikhali iyabonakala. Kuhambisana nokulahlekelwa ukwazi, ukucindezelwa kwama-reflexes, ukuphefumula kwe-pathological. I-edema ye-Cerebral ingaholela ekulahlekelweni komsebenzi wesistimu yezinzwa nokufa.
Isisekelo sokuvinjelwa kwe-ketonuria ekudleni okulinganiselayo. Inani elanele lamaprotheni nama-carbohydrate kumele abekhona ekudleni kwengane. Okuncamelayo kufanele kunikezwe inyama ebambekayo, inhlanzi, okusanhlamvu, isinkwa esinsundu, imikhiqizo yobisi. Futhi, ukudla kwengane kufanele kufake imifino emisha, izithelo namajikijolo.
Ukuvimbela ukwanda kwe-acetone egazini nomchamo, abazali bayalulekwa ukuba baqaphe ukudla kwengane. Izingane kufanele zidle ukudla okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku, ukuzila ukudla isikhathi eside akufanele kuvunyelwe.
I-Ketonuria ingenzeka ngokuphendula ekucindezelekeni ngokomzimba nangokomzwelo. Ababelethi akufanele bavumele imithwalo esindayo emzimbeni wengane. Izingane kufanele zibe nombuso onengqondo wosuku, isikhathi sokulala lapho amahora okungenani angama-8. Akunconywa ukulayisha ingane ngemibuthano eyengeziwe embalwa kanye nezigaba.
Njengoba sinezinga eliphakeme le-acetone kumchamo, kubalulekile ukwazi ukuthi yini okufanele uyenze nokuthi yiziphi izindlela okufanele uzithathe. Izenzo ezifanele ezifika ngesikhathi zingavimba ukuthuthukiswa kwe-acetonemic syndrome noma ziyeke izimpawu zayo ngesikhathi.
Ngokusabela okuhle nokubi ngokuqinile emizimbeni ye-keto, akudingekile njalo ukuya esibhedlela. Kulokhu, ungenza yonke imisebenzi edingekayo ekhaya.
Kuyadingeka ukunamathela ekudleni okuqinile. Ukudla kufanele kube nama-carbohydrate alula wokugaya ngenani elincane lamafutha. Ukudla okunezihlakala ngamanani amancane, lapho kungekho zinhliziyo ezigulini, kungakhishwa ngokuphelele (ngosuku lokuqala noma ezimbili).
Ukomisa kubaluleke kakhulu - ukuphindisela uketshezi nosawoti, ikakhulukazi ngokuhlanza okukhulu. Uma ukugabha kungalapheki, uketshezi ngeke lumunce. Kulokhu, kwenziwa imijovo evimba i-gag reflex.
Ungaphuza isiguli ngetiye elibuthakathaka noshukela ngokusekelwe kumaminerali amanzi angenamakhabhoni ngokuqukethwe okuphezulu kwe-alkalis, isisombululo seRegidron. Kepha into ebaluleke kakhulu ukwengeza ushukela.
Udinga ukuphuza okuyingxenye, ukuze ungavuseleli ukuhlanza. Uketshezi kufanele ulingane nokushisa komzimba okujwayelekile noma kwehliswe ngamadigri athile. Ngakho-ke igxilwa ngokushesha okukhulu.
Ukwenqaba ukuphuza nokuhlanza okungenakuqothuka enganeni ngisho nokwanda okuncane kwemizimba ye-ketone emchameni kuyimiyalo eqondile yokubiza i-ambulensi.
Esibhedlela, isiguli sifakwa ngekhambi le-glucose ngaphakathi, sinciphisa ukudakwa komzimba futhi senze okunye ukwelashwa kwezidakamizwa okuhlose ukululama ngokuphelele.
Ngemiphumela ebukhali yovivinyo olusheshayo, akufanele ubeke impilo yakho engcupheni. Ngakho-ke, udinga ukuya esibhedlela ngokushesha.
Izinkinga ze-acetonemic kusifo sikashukela nezinye izifo ezifanayo akufanele ziyekwe zodwa. Kubalulekile ukuthi ubonane nodokotela, hhayi ukuthi udambise ukuhlaselwa kuphela, kepha futhi ubheke isimo futhi ubukeze ukudla. Njengoba ukuqubuka kwesifo sikashukela kungadala i-acidosis, kukhombisa nokwanda kwesifo.
Izinga elikhulayo lemizimba ye-ketone emchameni wabo bobabili abadala nezingane iyinsimbi ethusayo. Noma ngabe isizathu sokwanda kwabo kubonakala singelutho kangako, akufanele ungasinaki. Lesi isikhathi hhayi nje sokucabanga kabusha ngokudla, lapho, mhlawumbe, kunokushoda okukhulu kwama-carbohydrate. Kepha futhi isikhathi sokuhlolwa okunemininingwane ethe xaxa, ikakhulukazi lapho kukhona ezinye izimpawu nezimo ze-pathological.
Kusho ukuthini ukuthi izidumbu ze-ketone emchini ezinganeni
Ukuqoqwa kwezidumbu ze-ketone ekuhlaziyeni komchamo kuyahlolwa ukuthola i-acetone. Ingakheka emzimbeni ngenxa yezizathu ezahlukahlukene. Kwesinye isikhathi i-acetone ingumphumela wezinqubo ezijwayelekile zomzimba, kepha kwesinye isikhathi ingakhuluma ngokuba khona kwezifo ezingatholakali ezidinga ukuxilongwa okwengeziwe.
Ukulandelwa kwama-ketones emchameni kukhombisa ukuthi ingane idinga ukuhlolwa okungeziwe kwezokwelapha. Ngasikhathi sinye, kufundwa izinkomba ezihambisanayo - izinga likashukela wegazi, ukubalwa kwamangqamuzana amhlophe egazi kanye ne-ESR.
Ungayibona kanjani i-acetone kumchamo
Akudingekile ukuthi udlule njalo umchamo wokuhlaziywa kwelabhoratri. Abazali bangagcina imichilo ekhethekile yokuhlola ekhaya ekhombisa ngokushesha umphumela oyifunayo. Le ndlela yokuxilonga isetshenziswa kangcono uma ingane inezimpawu ze-acetone. Ukutholwa ngesikhathi kwe-pathology kusiza kakhulu ukwelashwa futhi kufinyeze isikhathi sayo.
Imizimba evamile nephakanyisiwe ye-ketone
Imichilo yokuhlola isiza ukufeza ukuxilongwa kokuqala, nokubalwa okunembile kwenani lezidumbu ze-ketone kungenzeka kuphela ezimweni zelebhu. Ngokusekelwe kudatha etholakele, uchwepheshe uhlaziya isimo sempilo yengane.
Ngemuva kokuphela kocwaningo, abazali banikezwa umphumela. Ukunquma ukuthi inani lemizimba ye-ketone yedlula inani elingakanani, unganikeza ngokulandelayo:
"+" - kukhona ukuphambuka, kepha kuncane futhi kucishe kungabalulekanga. Ukuqoqwa kwezidumbu ze-ketone cishe kungu-0.5-1,5 mmol / L.
I - "++" - ukuphambuka kucishe kufinyelele kububanzi obukhulu bokukhula. Ukuhlushwa yi-4-10 Mmol / L.
"+++" - ukwephula umthetho okudinga ukulashwa okuphuthumayo kwengane kanye nokuqala kokwelashwa okunekhono. Ukuqokwa kukhombisa ukuthi okuhlushwa kudlule uphawu lwe-10 Mmol / L.
Ukuthatha ukuhlolwa kwelabhoratri ukuthola ukunqunywa kwezidumbu ze-ketone kuyadingeka uma ingane inezimpawu ze-acetone. Ukuxilongwa ngesikhathi, naka isimo senhlala-kahle yengane phakathi nosuku nobusuku.
Izimbangela ze-acetone kumchamo
I-acetone kumchamo ingaba isibonakaliso sayo yonke imvelo yokomzimba neye-pathological. I-acetone yomzimba ihlotshaniswa nokukhula okujwayelekile kwengane. Akasho ukuthi kukhona izifo. Imvamisa ezinganeni, livela kanye kuphela bese linyamalala lodwa ngaphandle kwemiphumela.
I-acetone yomzimba yenzeka ngokuqabukela. Imvamisa le nto ihambisana nokuphulwa komsebenzi ohlanganisiwe wezitho zangaphakathi, ezingaba yingozi esimeni sempilo sengane.
Izingane zasenkulisa noma ubudala besikole samabanga aphansi zibhekene ne-acetone ngenxa yokulimala kwe-carbon metabolism. Kungaba futhi ngenxa yokushoda kwe-glucose emzimbeni kanye nokuningi ngokweqile kwemikhiqizo yamaprotheni ekudleni.
Izidingo zemvelo ze-acetone zibandakanya ukucindezelwa kanye nokukhathazeka ngokomzwelo. Lokhu kungahambisana nezindleko zamandla aphezulu, ukushintshwa kwemizwelo. Izidumbu zeKetone ezakhiwe ngenxa yalokhu ziyadedelwa emchanjeni, njengoba izivivinyo zaselebhu zibonisa. Imvamisa lokhu kwandulelwa ukucindezelwa ngokweqile kwengqondo nangokomzimba, izinhlobo ezahlukahlukene zokushiswa ngokweqile, ukukhishwa njalo elangeni, isikhathi ngemuva kokuhlinzwa.
Isibonakaliso sokuqala okufanele sazise abazali yiphunga le-acetone emchameni. Ukulandela lokhu, udinga ukubheka ezinye izinkomba ze-acetone, ezingaba:
ukuqaphela ngemuva kokudla noma ukuphuza,
ukuntuleka kokudla ngenxa yokwanda kwenhliziyo,
uhambo olunqabile oluya ethoyilethi,
isikhumba esimile futhi somile
ubuthakathaka obujwayelekile nokukhubazeka,
ukungahambi kahle, okulandelwa ukozela kakhulu,
iphunga le-acetone ephuma emlonyeni.
Uma ingane iphumelela ukuhlolwa kwegazi okujwayelekile ngalesi sikhathi, izinkomba kufanele ziqwashise udokotela. Imvamisa, uchwepheshe ubeka uchungechunge lwezivivinyo ezengeziwe ukwenza ukuxilongwa okuyikho.
Imizimba ephakanyisiwe ye-ketone emchameni ngaphandle kokuthola ukwelashwa okufika ngesikhathi ingaholela ekudakweni komzimba wonke. Lokhu, nakho, kuvusa ukuphambuka ekusebenzeni kwezinhlaka zezitho. Ngokuhambisana nalokhu, ingane ihlukunyezwa njalo ngokuhlanza okuqine futhi okunamandla kakhulu, okukhinyabeza ukuqothuka komzimba.
Imiphumela yokuphelelwa ngamanzi emzimbeni iyadabukisa kakhulu - uma kungekho ukunakekelwa kwezokwelashwa, ukukhohlisa futhi umphumela obulalayo kungenzeka.
Ukwelashwa kwe-acetonymy kufanele kube ngaphansi kokuqashwa okuqinile kodokotela wezingane. Kubandakanya ukuthatha imishanguzo ekhonjiswe kwincwadi kadokotela, kanye nokulandela izincomo ezilandelayo:
Nikeza ingane yakho inani elanele lamanzi - okungenani ilitha nengxenye ngosuku. Uma ehlanza njalo, udinga ukuphuza njalo uhhafu wehora. Njengesiphuzo, amanzi e-alkaline netiye eliluhlaza nge-ulamula kufanelekile.
Landela ukudla okunqunywe udokotela wezingane. Ngaphandle kokulungiswa kokudla okunempilo, ukwelashwa okuphumelelayo akunakwenzeka.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, udokotela angenza i-enema yokuhlanza, uma kunesidingo. Kodwa-ke, isidingo saso singenxa yesizathu esivuse i-acetonemia. Uma, ngokwesibonelo, ilele ekulimeni kwe-helminthic, diathesis, noma ukubulala amagciwane, i-enema ayidingeki.
Ukungezelela okwejwayelekile kwemizimba ye-ketone kungaba wuphawu oluyingozi olukhombisa ukuthi kukhona ama-pathologies aqatha emzimbeni wengane, ngenxa yalokho, kuyadingeka ukuthola imbangela yalesi simo ngokushesha okukhulu. Ukwelashwa okuqala ngesikhathi nokubambelela ngokufanele ezincwadini zikadokotela kuzosiza ukugwema imiphumela emibi yokuphambuka.
Yimiphi imizimba ye-ketone futhi yini imvelo yayo yomchamo ezinganeni?
Isibindi somuntu ilabhorethri yangempela yamakhemikhali lapho izinto ezahlukahlukene zibolayo futhi zixube khona. Ama-ketones angenye yale mikhiqizo ye-metabolic.
Iningi lazo lakhiwa ngenxa yokuqhekeka kwamafutha avela ekudleni noma emafutheni omzimba okugcina. Ama-ketones afaka:
Lapho kunqunywa ama-ketones kumchamo wengane, odokotela baqondiswa yilezi zindlela ezilandelayo: 0 - ezingezinhle (akukho ukwelashwa okudingekayo), 0.5-1.5 mmol / L - mnene (ukulungiswa kokudla kuyadingeka), 4 mmol / L - Medi (usizo luyadingeka udokotela). Ukuqagelwa okungaphezulu kwe-4 mmol / L kuphezulu (ukwelashwa esibhedlela kuyadingeka).
Izidumbu zeKetone ziyizinhlanganisela ezinobuthi emzimbeni, kepha ukugxilisa ingqondo kwazo endaweni yegazi serum yomuntu ophilile akunandaba ukuthi akunamphumela olimazayo.Imvamisa, akukho ngaphezu kwe-1-2 mg% yemizimba ye-ketone ejikeleza egazini, ingena ezinso, ezakhiweni zemisipha nobuchopho futhi isetshenziswe lapho, idlala indima yezinto ezibonakalayo ezinamandla. Ukuwohloka kwama-acetones kuyichungechunge lokulandelana kokuphendula kwamakhemikhali, umkhiqizo wokugcina wawo okungamanzi nekhabhoni dayoksi.
Umzimba usebenzisa amakhalori akhishwe ngesikhathi sokubola kwawo njengamandla adingekayo ekuphenduleni kwe-metabolic iningi. Ukwakhiwa kwezidumbu ze-ketone kungukuphendula ngokomzimba futhi kwenzeka ngokuqhubekayo. Kuyabonakala ukuthi ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala kunokuthambekela okukhulu kwe-ketosis kunabantu abadala. Siyini isizathu salokhu? Isizathu esiyinhloko ukuqina kwemetabolism kakhulu ezinganeni. Umzimba wengane udla amandla amaningi kunomuntu omdala. Izingane zisesimweni sokukhula nokwakheka, futhi ngokuvamile, ingane iyasebenza futhi iselula.
Lokhu kuholela eqinisweni lokuthi izinqolobane zama-carbohydrate lapho umzimba wengane udonsa amandla ngokushesha ziphela futhi kufanele asebenzise amafutha njengomunye umthombo. Amafutha, ephuka, aphenduka abe yimizimba ye-ketone. Kwenzeka into efanayo nakubantu abadala lapho behlangabezana nokuzivocavoca okukhulu ngokomzimba noma balandela ukudla okune-carb okuphansi ngokweqile.
Ukuqina okwandayo kwemizimba ye-ketone esegazini (ngaphezulu kwama-20 mg%) ibizwa ngokuthi yi-acetonemia futhi ikhula ezimweni eziningi ezihambisana nokushintshwa kwe-metabolism. Imbangela ye-acetonemia ingaba: ukwephulwa kwe-carbohydrate metabolism (isifo sikashukela), ukubulawa yindlala isikhathi eside, ukucindezela ngokweqile komzimba, ukuntuleka kwe-carbohydrate engapheli, ukushoda kwe-enzyme, isifo sesibindi, ukucindezela.
Ngalezi zokwephulwa, kwakhiwa imizimba eminingi ye-ketone engenasikhathi sokucutshungulwa ngumzimba, okuholele ekugxileni kwabo ngokweqile egazini. Ama-acetones akuzona izinto ezingathathi hlangothi: zanqwabelana egazini, agudluza i-pH ohlangothini lwe-acid, okuholela ekukhuleni kancane kancane kwe-acidosis.
Izimbangela zama-ketones emchameni
Okuqukethwe okujwayelekile kwemizimba ye-acetone ku-plasma yegazi akudluli i-1-2 mg%. Ezimweni eziningana ze-pathological, ukuqina kwabo kukhuphuka, futhi, kufinyelela ezingeni le-10-15 mg%, i-acetone ingena kumchamo. Ngakho-ke, umzimba ufuna ukususa lezi zinto eziyingozi kuwo. Ukuvela kwezidumbu ze-ketone emchameni kuwuphawu olukhombisa ukuthi i-metabolism ayonakalisiwe. Ngaphezu komchamo, umzimba ubuye usebenzise ezinye izindlela zokukhipha i-acetone: ngokusebenzisa izithukuthuku zesithukuthuku - ngesithukuthezi - nangamaphaphu - ngomoya oxoshwe.
Ama-ketones asebenza emzimbeni njengama-oxidizing agents, ama-radicals mahhala akhona kuwo asabela ngokuhlangana nolwelwesi lwesitho, kulimaze nawo. Imiphumela yalezi zinto esebuchosheni iyabulala ikakhulukazi. Ukwanda kokuxineka kwabo egazini kwenzeka kancane kancane futhi kudlule uchungechunge lwezigaba ezilandelanayo, ngasinye sazo sinezimpawu ezithile zaso.
Ukuhlukaniswa kwe-Acetonemic Syndrome
Isigaba sokuqala sokwandisa i-acetone yegazi sibizwa nge-ketosis. Izimpawu ezilandelayo ziyimpawu yalo:
iphunga le-acetone emoyeni okhipha umoya,
ukuvela kwe-acetone emchameni.
Isimo sesiguli ngalesi sikhathi siyenelisa, futhi izikhalazo zingahle zingabikho. Akubona bonke abazali abakwazi ukunaka ukubukeka kwephunga elithile elivela emlonyeni wengane, kufana nephunga lama-apula avuthiwe noma amazambane abolile.
Uma kungalashwa, isimo se-ketosis siyathuthuka futhi singena esigabeni se-ketoacidosis. Izimpawu zalokhu kuphazamiseka zibanzi kakhulu, futhi ngaphezu kwezimpawu ezigciniwe ze-ketosis, zifaka:
ukuphefumula kaningi futhi okunomsindo
izimpawu zokuphelelwa ngamanzi emzimbeni.
I-Ketoacidosis inesifo sikashukela (esivela ekuphuleni umthetho we-carbohydrate metabolism obangelwa ukungabikho kwe-insulin) nokungahambi kwesifo sikashukela (okubangelwa ukuzikhandla ngokomzimba, ukucindezelwa noma izici zokudla okudliwayo). Uma isiguli esinjalo singasizwa ngesikhathi, khona-ke amandla okugcina omzimba ancishisiwe futhi isigaba se-ketoacidosis - ikhefu lesifo sikashukela - singena. Izimpawu zalesi sigaba:
amazinga aphezulu e-acetone egazini nomchamo,
iphunga elinamandla le-acetone ephuma emlonyeni nasesikhunjeni,
nomsindo, ukuphefumula okuphoqelelwe,
Izinga eliphakeme lemizimba ye-ketone iholela ekuqinisekiseni kwe-acid kwegazi nokukhula kwe-acidosis. Njengoba ukusabela okuningi kwamakhemikhali emzimbeni kudinga i-pH ethile, ukuguquka kwayo okubukhali ohlangothini lwe-asidi kuphazamisa izinqubo eziningi ezibalulekile ze-metabolic. Okuyingozi kakhulu ukwanda kokuxineka kwabo kwisifo sikashukela, ukuntuleka kokwelashwa kulesi simo kungaholela ekuguqukeni kwenqubo kuya esigabeni esibunjiwe kanye nokuthuthukiswa kwezinkinga. Imiphumela ye-ketoacidosis enzima:
Indlela yokwenza ukwakhiwa kwezidumbu ze-ketone emzimbeni
Imizimba yeKetone (ketones) ifaka izinto ezinjenge-acetone, acetoacetate, hydroxybutyric acid. Ngokuvamile, lezi zinto zingumthombo wamandla wamaseli. Njengoba lezi zinto zingama-hydrophilic, zingena kalula emafutheni omzimba, ngokwesibonelo, umchamo.
Izidumbu zeKetone zakheka kusuka i-acetyl CoA. Le nto yakhiwa ngesikhathi sokudla kwamafutha acid. Imvamisa, inani elincane lemizimba ye-ketone ikhona egazini.
Kubantu abadala nezingane
Ukutholwa kwama-ketones emchameni kungabangelwa yizici ezinjengokuthi indlala nesifo sikashukela. I-glucose ingumthombo oyinhloko wamandla. Lapho ushesha, ushukela uyeka ukuvela ekudleni, ngakho-ke umzimba ufuna ezinye izindlela zokwengeza amandla.
Izidumbu zeKetone zomchamo ezinganeni zivame ukutholakala nazo ukungondleki.
Ku-mellitus yesifo sikashukela, kunokuntuleka kwe-insulin, ekhuthaza ukudluliselwa kweglucose kumaseli ukuze ibe namandla. Ngokufanelekile, ngokuntuleka kwe-insulin, ushukela awangeni esitokisini. Futhi amandla akhiqizwa yi-oxidizing ketone body.
Njengoba kuchaziwe ngaphambili, imizimba ye-ketone ingumthombo wamandla. Kubantu abadala, bangakha nalapho ukudla okusetshenziswayo nokusetshenziswa kwamandla komzimba kungafani.
Isibonelo, uku ekudleni okuphansi kwe-carb, okungukuthi, uthola ushukela, kepha akwanele. Futhi, usahlanganyela emisebenzini eyengeziwe yokuzivocavoca (unyamalala amahora amaningi ehholo). Inani lama-carbohydrate adliwayo awanele umzimba wakho, futhi ama-ketones aqala ukukhiqizwa ngamandla. Ngakho-ke, kubalulekile ukulinganisa inani lamaprotheni, amafutha nama-carbohydrate ekudleni.
Kunobufakazi bokuthi kwabesifazane abakhulelwe, ukuba khona kwezidumbu ze-ketone ku-trimester yokuqala kumchamo kuwuphawu lokuqala lwe-toxicosis. Izidumbu zeKetone ezivela kumchamo kufanele zinyamalale ngokuzayo. Kodwa-ke, ukutholwa kwe-ketonuria ezigabeni zakamuva kuphakamisa ukuthuthukiswa kwe-pathology kwabesifazane abakhulelwe, okudinga izifundo ezengeziwe.
Kubalulekile ukuqapha izinga lemizimba ye-ketone esegazini nomchamo, ngoba inobuthi, ibangele ukukhula kwe-ketoacidosis. Lokhu ngokuzayo kungaholela ekusebenzeni kahle kwenhliziyo, uhlelo lokuphefumula, ukuhamba kwegazi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi ungaphuthelwa i-ketonuria futhi uvikele ukuthuthukiswa kwezinkinga ezinkulu ngesikhathi.
Imizimba ye-ketone ejwayelekile yomchamo ne-acetone
Ezinganeni nakubantu abadala, imizimba ye-ketone ejwayelekile akufanele ibonwe. Lapho kukalwa umthamo wansuku zonke womchamo, ukuqoqwa kwezidumbu ze-ketone akufanele kungabi ngaphezu kwama-50 mg.
IHydroxybutyric acid (65 - 70%) ikhishwa kakhulu kumchamo. Endaweni yesibili yi-acetoacetate (cishe i-30%). Futhi i-acetone okungenani ikhishwa emchameni - 3%.
Kukhona ukuxhomekeka kwezinga lemizimba ye-ketone esegazini nomchamo. Ngokukhuphuka kwezinga lemizimba ye-ketone egazini kuya ku-1.0 mmol / l, "ukulandelwa" kwama-ketones kuphawulwe emchameni. Lapho usufika ketonemia kuze kufike ku-1.5 mmol / l - ketonuria ebalulekile.
Ukulungiselela ukuhlolwa komchamo
Ukulungiselela ukuthatha uhlolo lomchamo wama-ketones kuyafana nokuhlolwa komchamo okuvamile.
Kubalulekile ukuthi ungasebenzisi imikhiqizo eshintsha umbala womchamo (ama-beet). Xhumana nodokotela wakho ngemithi oyiphuzayo. Mhlawumbe ezinye zazo zingathinta imingcele yomchamo.
Ngosuku olwandulela isifundo, gwema ukucindezelwa okungokomzwelo. Ukuvivinya umzimba ngokweqile kungathinta nomphumela. Kunconywa ibha noma i-sauna.
Umchamo kumele uqoqwe esitsheni esingenantambo. Labo abangafuni ukuhluphana ngezimbiza ezibilayo zokudla kwezingane kufanele bazi ukuthi izitsha ezikhethekile zithengiswa ekhemisi.
Kubalulekile ukufeza indlu yangasese yesitho sangasese sangasese. Ingxenye evamile yomchamo wasekuseni kufanele iqoqwe esitsheni, ngoba igxiliswa kakhulu ngemuva kokulala futhi ikhombise ngokunembile izinqubo emzimbeni.
Ezinganeni ezingalawuli isenzo sokuchama, kufanelekile ukusebenzisa imichamo. Banamathela emzimbeni, kuthi ngemuva kokuqoqa umchamo, okuqukethwe kuthululelwe emgqonyeni oyinyumba bese kuyiswa egumbini lokucwaninga.
Umchamo ngemuva kokuqoqwa kufanele uhanjiswe elebhu ngaphakathi kwamahora ama-2.
Ukuhlaziya kwenziwa kanjani
Ukutholwa kwemizimba ye-ketone emchameni kuvame ukwenziwa kakhulu kanye nokuchama okujwayelekile.
Ukuhlaziywa komchamo okujwayelekile kungenziwa ngezindlela eziningi:
ngobuningi - usebenzisa imichilo yokuhlolwa kokuxilonga. Ngokuqhathanisa okubonakalayo nesikali sezinkomba, kwenziwa isiphetho,
ngobuningi - Imichilo yokuhlola ibekwe kwi-analyzer yomchamo, ebala ngokunembile okuqukethwe kwezinto umchamo.
Imichilo ekhethekile iyatholakala ukuthola kuphela ama-ketones omchamo.
Indlela esetshenziswayo imi ngalendlela elandelayo: umucu wokuhlola ubhajwe umchamo imizuzwana eminingana, njengoba kuchazwe kwimiyalo eza nemivimbo yokuhlolwa. Bese uhambe isikhashana (imizuzwana eminingana), ukuze ukusabela kube nezinkomba. Ngemuva kwalokho ziqhathaniswa nezinga lezibuko noma abahlaziyi bomchamo ezisetshenziselwa lezi zinhloso.
Njengomthetho, kunzima ukwenza iphutha ezenzweni ezinjalo. Kuyaqabukela ukuthi ngenxa yokwephulwa kwezimo zokugcina imichilo yokuhlola noma ukungayibukeli impilo yeshalofu, imiphumela ayilungile.
Lapho kunqunywa khona amathoni womchamo
Ngokwenqubomgomo ye-MHI, ungavivinya umchamo mahhala enhlanganweni yezokwelapha onamathiselwe kuyo. Ungaya futhi esikhungweni sezokwelapha esikhokhelwayo. Kungcono ukuthi ifakwe kohlaziyo lobuchwepheshe, khona-ke imiphumela izonemba kakhulu.
Ungathola ngokutholakala komhlaziyi ngokubiza isikhungo sezokwelapha.
Ukuhlolwa komchamo okujwayelekile kungakubiza kusuka kuma-ruble angama-200 kuye kwangama-400 lapho usebenzisa imivimbo yokuhlola. Uma kunesidingo, ukuhlolwa okuncane komchamo, intengo ingakhuphuka.
Kuzo zonke lezi zinto ezingenhla, kuyacaca ukuthi ama-ketones omchamo ayindlela ebalulekile yokuxilonga yezinqubo ezahlukahlukene zomzimba emzimbeni. Ama-ketones anomthelela onobuthi emzimbeni, ukutholwa kwawo ezinganeni, abadala kanye nabesifazane abakhulelwe akufanele bavunyelwe ukukhukhuleka. Kubalulekile ukuthola imbangela yezinguquko ze-pathological futhi uqale ukwelashwa ngesikhathi.
Kufanele kube yini ukondliwa kwengane eye yathola i-acetone kumchamo wayo? Izici zokudla kwe-ketoacidosis:
Ukudla ngezingxenye ezixutshiwe ngezikhathi ezithile zamahora angama-2-3,
ukwakheka okulula kwezitsha ezinenombolo encane yezakhi,
vimbela konke ukudla okuthosiwe,
izitsha zilungiswa ngokudla, ukubhaka noma ukubila,
isidlo sakusihlwa kufanele sibe silula futhi kungakapheli amahora angu-6, 7,
ebusuku, ingane inikezwa ingilazi ye-kefir engenamafutha,
ingxenye enkulu yefayibha kanye namafutha amancane,
inyama nenhlanzi kuphekwe ngohlobo lwama-meatballs enziwe ngotshani, ama-meatballs, ama-meatballs.
Inyama enamafutha, inhlanzi, imikhiqizo yobisi, ukudla okuthosiwe, amakhowe, amajikijolo omuncu nezithelo, utamatisi, isigaxa, isipinashi akufakiwe ekudleni. Isoda elivinjelwe nazo zonke izinhlobo zokudla okusheshayo.
Okubaluleke kakhulu ku-ketoacidosis uhlobo lokuphuza. Ivuselela imetabolism kasawoti wamanzi emzimbeni, isiza ukukhipha ama-ketones futhi ibuyise amanani ajwayelekile we-pH. Odokotela beluleka ukulandela le mithetho elandelayo: nikeza zonke iziphuzo kwifomu elifudumele (ama-degree angama-37-37), lapho behlanza, baphuze ngokweqile i-10-15 ml ngokukhonza, iziphuzo kufanele zibe noshukela olulinganiselayo. Iziphuzo ezinconyelwe notshwala:
40% isisombululo sikashukela
ukumiswa kwe-raisin (1 isipuni ngengilazi yamanzi),
ukufaka amanzi amaminerali ngomphumela we-alkalizing (Essentuki N4, Borjomi),
izixazululo zokuvuselela amanzi emzimbeni (Rehydron).